Nahazo vola ireo jiolahy… : navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay Karana tompon’ny Kalidas | NewsMada
Nahazo vola ireo jiolahy… : navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay Karana tompon’ny Kalidas
Par Taratra sur 05/02/2018
Nifanaraka ihany ny fianakaviana sy ireo mpaka an-keriny? Navotsotr’ireo jiolahy, omaly, i Kantilal Rajnikant, ilay karana tompon’ny tranombarotra fivarotana firavaka volamena, Kalidas eny Andohan’Analakely…
Tapa-bolana mahery tany am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny. Fantatra izao, araka ny loharanom-baovao fa navotsotr’ireo mpaka an-keriny i Kantilal Rajnikant 68 taona, tompon’ny tranombarotra fivarotana firavaka volamena, Kalidas eny Andohan’Analakely. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny fepetra nifanarahan’ny fianakaviana sy ireo mpaka an-keriny ka niafara tamin’izao famotsorana ity teratany karana ity izao. Nandoa ilay vola 2,5 miliara Ar notakin’ireo jiolahy ihany ny fianakaviana. Voalazan’ny loharanom-baovao fa vola mitentina 6 tapitrisa euros, manodidina ny 24 miliara Ar no notakin’ireo mpaka an-keriny tamin’ny fianakavian’i Kantilal R., saingy niafara tamin’ny 2,5 miliara Ar izany taorian’ny fifampiraharahana tamin’ny alalan’ny adivarotra teo amin’ny fianakaviana sy ireo jiolahy. Manana olana eo amin’ny fahasalamana rahateo ity Karana ity. Ny herinandro lasa teo no nifanaraka ny fianakaviana sy ireo jiolahy amin’ny hanomezana ny vola tao amin’ny hotely lehibe iray eto an-drenivohitra. Voalazan’ny loharanom-baovao hatrany fa ny asabotsy teo no nanomezan’ny fianakaviana ny vola notakin’ireo jiolahy.
Olona dimy naiditra am-ponja…
Tsiahivina fa nalain’ny jiolahy nandeha moto nirongo basy Kalachnikov sy PA, ny 17 janoary 2018 lasa teo tamin’ny 6 ora sy 30 mn hariva teny Antanimena manoloana ny villa Pradon, i Kantilal R. raha hihazo ny trano fonenany eny Ivandry. Tsy hita ny toerana nametrahan’ireo olon-dratsy azy taorian’izay. Fantatra kosa fa olona dimy (vehivavy ny iray) no voarohirohy amin’ity raharaha ity ka nosamborina avy hatrany taorian’izay. Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny efatra raha nalefa eny Antanimora ny vehivavy iray, ny zoma teo. Voalazan’ny loharanom-baovao hatrany fa mpiray tsikombakomba ireto nidoboka am-ponja ireto fa hafa kosa ireo tena nanao ny fakana an-keriny.